Aasaasi: Xidhmada weyn ee Alaabada Kirismaska ​​$ 19 | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Sawirro, Khayraadka, Kaararka kartoonka
Waxaan la soo laabannay mid kale oo ka mid ah xirmooyinkaas kirismaska ​​ah oo aan ku raaxeysaneyno kuna fidin karno ilahaaga si aad u awoodo sameynta kaararka salaanta kirismaska, u dirto kaararka boostada ama aad si fudud ugu qurxin karto gurigaaga kuwa DIY. Waxaan hadda haysannaa in ka badan 1.800 alaab Kirismas ah naqshadeyntaada kaliya $ 19.
Haa, sidaad u akhrisay. Kale dalabyadaas aan la beddeli karin Iyada oo la ballaarinayo waxyaabaha la xiriira Kirismaska ​​taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad aad u jajaban tahay markay tahay bixinta miisaaniyad macaamiil kala duwan. Haddii aad sidoo kale ka mid tahay kuwa inta badan nolol raadiya, ma jiraan kuwa badan oo 19ka doollar ah si aad hadiyad ugu kala soocdo qof aad jeceshahay, markaa, horay u soco!
Halkan ka soo iibso xidhmada kaliya 19 doolar
1 Baakad weyn oo tayo aad u weyn leh
2 Cuckoos-yada asalka vector aan xuduud lahayn
3 Guumaysyada kirismaska ​​ee PNG
4 620 horudhac ah ee Lightroom
6 260 sooyaal kirismas midabo leh
7 100 Lakabyada Kirismaska
8 25 geedo yar yar oo loo yaqaan 'Christmas'
9 5 Lakabka Kirismaska ​​PSD
10 24 baraf baraf ah
11 24 baraf baraf ah
12 Ciida iyo ciida masiixiga
13 Baraf kala duwan
Baakad weyn oo tayo aad u weyn leh
Kahor intaadan guda gelin inaad iftiimiso mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad ka heli doonto xirmadan, waa inaan sheegnaa in badan oo ka mid ah sawirada iyo sawiradu waa tayo aad u tiro badan. Taasi waa, waxay la siman yihiin waxa maanta laga filayo kaarka salaanta kirismaska ​​ee la sameeyay 2018 si loogu gudbo 2019.
Waa buug-yare aan dhammaad lahayn oo taas ururi dhammaan noocyada kala duwan ee Kirismaska ​​dhexdiisa. Sawirada Santa Claus, geedaha kirismaska, barafka barafka, sawirro u gaar ah, xayawaanada caadiga ah ee taariikhahaas sida deerada ama sawirada sanduuqyada hadiyadaha ah oo aad loo soo bandhigay taasna waxay kaa caawin kartaa inaad ka dhex muuqato shabakadaha bulshada.
Waa a xirmo Kirismas ah oo aad u dhow oo aan waxba ka maqnayn. Mawduucoodu wuxuu u taagan yahay:
20 sawirro dulinka.
10 sawirro qaab PNG ah asal hufan.
36 walxo lakab ah PSD.
408 baraf baraf ah qaab PNG leh asal hufan.
260 sooyaal oo leh sooyaal hufan (iska cafi shaqada).
450 lakab oo leh asal hufan.
620 Heerarka hore si loo hagaajiyo dhammaan sawirada kirismaska ​​ee aan hayno.
Cuckoos-yada asalka vector aan xuduud lahayn
Maxaa laga dhahayaa asalkaas hufan ee qaabka dulinka oo leh naqshad kale oo aad u kala duwan. Haddii aad dooneysid inaad sameysid warqad duube ah, sameyso kaarka kirismaska ​​ama gidaarka qeyb ka mid ah gurigaaga oo warqad ku qoran, sawiradan vektorka ayaa ka fiican sidii hore.
Naqshadeynta ayaa ah mid aad u beddelan midabka ugu weyni waa casaan. Way kala soocdaa gebi ahaanba geedaha kirismaska ​​si kasta iyo xiddigahaas iyaga oo ka dhigaya kuwo u dhow naqshado gaar ah. Haddii aad rabto inaad ka duwanaato oo aad macmiilkaaga ka yaabiso taabashadaas gaarka ah, xirmadan sawirrada ah ee dulinka ayaa ah tan ugu fiican xirmadan.
Xirmadaan waxaa lagu heli karaa asalka hufan ee AI, EPS iyo xitaa qaabka SVG; Si kale haddii loo dhigo, waxay ku sababi karaan saamaynta ugu yar ee rarka culeyska websaydhkaaga haddii aad taqaanno sida loo rakibo qaabka vector ee ku dhowaad uun kilobyte.
Guumaysyada kirismaska ​​ee PNG
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ku jira buuggan ayaa ah kuwa guumaysiga kirismaska. Taxane ah cuckoos guumays ah oo aan ka helno dhammaan noocyada loogu talagalay u istaag indhahaas si aad isugu dhow. Waxaad u qaadan kartaa nooc kasta oo ujeeddo ah si ay u noqdaan halyeeyada.
Waxaa jira taas Koofiyadaha kirismaska, oo leh baalal malaa'igo ah, oo leh geesaha deerada ama xitaa dabool kale oo kuwa qabow dhagaha ka fura. Waxaad awoodi doontaa inaad isku darto qaababka ugu kala duwan si ay u noqdaan sawir madadaalo leh sawir cadaalad ah oo taxaddar leh.
Guud ahaan waxaa jira 10 guumeystayaal cuckoo ah oo qaab PNG ah oo leh hufnaan hufan oo aad loogu baahan yahay awoodo inaad lashaqeyso Photoshop ama kuwa loo yaqaan 'Affinity programs' oo si aad ah u guuleysanaya. Waxaan ku xusuusineynaa in xirmadan gorayada ay sidoo kale ku jiraan mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha ugu muujiya wajiyada. Taasi waa, indhahooda, afkooda iyo walxahaas qurxinta ee dharkooda si aad "u dhisi karto" guumaysatadaada.
620 horudhac ah ee Lightroom
Lightroom ayaa leh noqo barnaamij lagama maarmaan u ah dib u cusbooneysiinta sawirrada. Iyo inkasta oo aan ku cuni karno qayb ka mid ah waqtiga nolosheena si aan u habeynno khidadahaas si aan u helno dhammaan noocyada natiijooyinka ama aan ku nuuxnuuxsanno chiaroscuro sawir lagu qaaday taleefannadeenna casriga ah ama Nikon, runta ah lahaanshaha taxane hore ayaa si weyn u fududeynaya hawsha soo saarista sawirro tayo sare leh.
Tani waa halka 620 ee hore loogu qoondeeyay Lightroom ay ku soo galaan xirmadan weyn ee Kirismaska. Fikradda dhammaantood waa xooji kuwa sawirada kirismaska si ay u sii dhalaalaan oo ay u dhigaan taabashada sixirka ee ku xiran taariikhahaas. Waxaan haynaa noocyo badan oo iyaga ka mid ah halkanna waxaad ka heli kartaa sawir ku tusaya isbeddelka weyn ee laga sameeyay "ka hor" iyo "ka dib" oo ay la socdaan qaar ka mid ah noocyada hore ee Lightroom.
Aynu nidhaahno presets ama filtarrada ayaa loo sameeyay si loo sameeyo sawirkaas kirismaska aad u fiican eeg. Kaliya waa inaad iskudaydaa inta yar intaad kaheleyso midka ugufiican sawirkaas.
Qaar ka mid ah horena oo awood u leh si fiican u dheji sawirka si aad u siiso isku dheelitirnaan ka wanaagsan midab ama muuji halo sixir leh oo nalalkaas qurxiya geedaha kirismaska. Waxaa jira iyaga sababaha oo dhan, sidaa darteed waxaan wajaheynaa mid ka mid ah qodobbada udub dhexaad u ah xirmadaan Kirismaska ​​oo aad ku heli karto $ 19. Dalab weyn oo lagu ballaadhinayo waxyaabahaaga gaarka ah xilligan oo kale sanadka.
Mana seegi kartid a xirmo dabeecaddan waa maxay baraf baraf wata. Daadinta baraf baraf ah oo ku habboon shaqo kasta oo naqshadeyn ah waxaanna inta badan ugu baahannahay qaabab kala duwan, midabbo iyo naqshado.
Wadar ahaan waa 250 lakab oo ah baraf baraf ah ayaan haynaa xirmadan weyn ee loogu talagalay Kirismaska. Waxaa lagu gartaa inay ku jiraan xallinta 5.000px X 3.325 px oo leh qoto dheer 300dpi. Taasi waa, waxay u ekaan doonaan si fiiqan fiiqan haddii aan ku isticmaalno kaararka boostada 800 x 600 pixel. Waxaa sidoo kale lagu heli karaa 5 midab si aad ugu darsato shaqooyinkaas aad qaban doontid maalmahaan Kirismaska.
Sida aad ku aragtaan sawirada aan wadaagno way ka baqayaan mid kasta oo iyaga ka mid ah. Marka waa mid kale oo ka mid ah qodobbada udub dhexaad u ah xirmadan weyn.
260 sooyaal kirismas midabo leh
Waxaan hada u leexaneynaa a taxane midab leh oo dhalaalaya dhalasho Kirismaskan. Guud ahaan waxaa jira 260 waxaanan ka helnaa dhammaan noocyada suurtagalka ah, naqshadaha iyo isku darka weyn ee midabada si xoog leh loogu soo jiito dareenka kuwa hela kaarka salaanta kirismaska.
Runtu waxay tahay inay heysato repertoire weyn in la helo xoogaa lacag ah oo moodello ka muuqdaan, marka shaqooyinkaas ay tahay inaan ku soo bandhigno dhacdo ama xaflad Kirismas ah, way ka fiican yihiin sidii hore. Sida kuwa kale ee ka kooban, waxay ku sugan yihiin xallin sare oo si dhammaystiran ayaa loo qeexay; haddii ay ahaato wax kasta oo ay ahayd inay u qalmaan in loo qaado madbacadda oo la arko boodhadhka aan ugu talagaly albaabka hore ee naadiyada qaar ama xafladda deegaanka.
100 Lakabyada Kirismaska
Koofiyadaha Kirismaska ​​waxay leeyihiin saameyn weyn iyagoo aad u sarreeya. Waa sida inaad rinji ugu xoqdo burush kaas oo barafku uu ahaa shayga lagu sawiro iyo rinjiyeynta, markaa waxaad ka heli kartaa fikrad ah dhammaadka weyn ee ay leedahay.
Lakabyadaasi waxay u jiraan si kasta oo suurtagal ah iyo qaar badani xitaa waxay metelaan xarfaha si ay ugu mahadnaqdo hal-abuurkeennu waxaan boos ka siin karnaa kaararkaas salaanta ah ama boodhadhka Kirismaska ​​ee dhammaadka sannadka.
Xalku waa 4.500 px x 4.500 px oo leh qoto dheer 300 dpi.
25 geedo yar yar oo loo yaqaan 'Christmas'
Mid ka mid ah fikradaha waaweyn ee lagu fuliyay xirmadan ayaa isku dhafan geedaha yaryar ee kirismaska. Iyagu waa geedo 3D ah oo u ekaysiinaya asalka hooska kuwaas iyo naqshad yar oo yar. Waxay u egtahay in qaar naqshadeeye guryaha ka mid ah oo waaweyn ay barnaamij u qaateen sida Maya oo ay waqti fiican ku qaadatay sameynta waxa uu fahmayo oo ah geedka Kirismaska ​​oo aad u qaas ah.
Haddii aad raadineyso wax qaas ah oo gaar ah kaarka salaanta ee u baahan u hibeyntaada, 25-kan geed ee ugu yar ayaa ka sarreeya heer sare. Waxaan ka hadlaynaa faylasha PSD oo leh xallinta 4.650 pixels x 3.125 px iyo qoto dheer 300DPI.
5 Lakabka Kirismaska ​​PSD
Mid ka mid ah naqshadaha kala soocaya xirmadan ayaa ah 5 faylal PSD ah oo si quruxsan u qurxin kara qaar ka mid ah dukaamadaas aan raadineyno waqtigan si aan u helno hadiyad ka duwan. Waxay ku dhowdahay a Muffins karinta gebi ahaanba sonkor leh oo midabbada casaanka iyo casaanku ku badan yihiin midabada midabka leh.
Waxay ku samaysan yihiin 3D, sidaa darteed iyagu waa la siiyay xaqiiqo weyn. Taasi waa, waxaan ku wada dari karnaa si dhammaystiran sawirro macquul ah oo aan ku leenahay shay kasta oo lagu qurxiyo ama jikadayada oo ah cunsurka ugu weyn. Dhammaad wanaagsan oo taasi waxay ku dareysaa tayo badan dhammaan qaybaha xirmadan ee loogu talagalay Kirismaska.
24 baraf baraf ah
Taxanahan barafka waxaa lagu gartaa maadada: maar. Runta waa in la sheegaa inay yihiin kuwo qurux badan oo culus duurjoogta dhalaalaysa ee dhalaalaya daahyada naxaasta ah.
Nooc kale oo baraf baraf ah oo tayo badan ku daraya setka oo dhan laftiisa. Waxay kala yihiin 24 baraf baraf ah oo qaabab kala duwan leh, dhumuc iyo qaabab kala duwan, inkasta oo ay dhammaantood wada leeyihiin qodobkaas oo ah naxaas. Haddii aan ku dari karno waxyaabo kale oo qurxin waxay u horseedi kartaa kaar salaanta oo ka duwan oo gaar ah, marka aan xoogaa ka shaqeyno.
Farqiga weyn ee u dhexeeya xirmadii hore waa sheyga matalaya: dahab. Waxaa lagu gartaa cabirrada 6.500 px X 6.500 PX iyo qoto dheer 300 DPI.
Sidoo kale nashqaddoodu aad ayey u wanaagsan tahay waxayna awood u leeyihiin inay noqdaan kuwa barafleyda ah ee ay la socdaan qurxin qaar ka mid ah astaamaha kirismaska. Waxay horeyba kuugu xirnaan doontaa inaad ogaato sida loo helo meesha ugu fiican ee lagu qurxiyo shaqooyinkaaga macaamiisha kala duwan.
Ciida iyo ciida masiixiga
Sida baakadaha kale ee aan khadadkaan kusoo qaadnay mararka qaarkood, waxaan haynaa laba xirmo oo la xiriira grunge iyo macdanta ama birta culus. Waxaa lagu kala soocaa qaab dhismeedka loo adeegsaday iyo sheyga isdaba jooga ah ee keena noocyada kale ee soo bandhigida. Dheeraad kale oo weyn oo ka mid ah xirmadan Kirismaska ​​ah oo aan seegi karin haddii aan haysanno kuwa $ 19 ee ay ku kacayso.
Dhinac 24 4.500 x 4.500 px grunge snowflakes, qoto dheer 300DPI iyo 4 midab. Halka macdanta kor u kacdo ilaa 4.000 x 4.000 pixels oo leh 300DPI si qoto dheer. Ah, sidoo kale 4 midab si loo kala duwo loona isticmaalo sida ay innagu habboon tahay.
Baraf kala duwan
Waxaan ku dhameysanay taxane kale oo baakado baraf ah taas waxay ka socdaan kuwa cad iyo kuwa aan fiicnayn kuwa aadka u xiisaha badan oo u muuqda inay doorbidiin weyn ka leeyihiin astaamahaas kirismaska. Waxa kale oo jira qaar madow haddiiba aan leenahay qaraabo doorta filimada Tim Burton.
Haddii aad jeceshahay ilaha waxaad ka iibsan kartaa xirmada oo dhan 19 doolar oo keliya xidhiidhkan
Marka la soo koobo, a baakad weyn oo ka kooban walxaha Kirismaska ​​oo aan waxba ka maqnaan doonin si loo qurxiyo dhammaan hambalyadaas, waraaqahaas oo lagu soo qoro hadiyado ama boodhadhkaas oo saaxiibkiis uu doonayo in xisbigu la murmo dhammaadka sanadka. Haddii aad rabto inaad ku hesho waxyaabo badan oo ka kooban maadadaada oo aad u nuglaato, xirmadan ayaa si fudud muhiim u ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » In kabadan 18.00 waxyaabaha kirismaska ​​ee naqshadahaaga kaliya $ 19!
Sawiradan laga sameeyay ulaha willow
Soo ogow waxa midabkaaga midabka leh ee 'Pantone 2019' uu ku yaal su'aalahan